साउथ फिल्मको ट्रेलरमा कस्तो देखिइन् स्वस्तिमा खड्का र माओत्स्य गुरुङ ? (भिडियो सहित) – Gandaki News
साउथ फिल्मको ट्रेलरमा कस्तो देखिइन् स्वस्तिमा खड्का र माओत्स्य गुरुङ ? (भिडियो सहित)
पोखरा, १ माघ / नेपाली कलाकार स्वस्तिमा खड्का र मात्स्य गुरुङ अभिनित दक्षिण भारतीय फिल्म थिरिमालीको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।
फिल्ममा अनुबन्ध भएदेखि नै नेपालमा चर्चा भएको थियो । दक्षिण भारतीय फिल्म खेल्न सौभाग्य पाएकी दुबै कलाकारको साढे दुई मिनेट बढी रहेको ट्रेलरमा हेर्न सकिन्छ ।
ट्रेलरमा स्वस्तिमाको इन्ट्री नृत्यबाट सुरु हुन्छ । फिल्ममा नेपालको थुप्रै ठाउँहरु देखाइएको छ । काठमाडौं, पोखरा र लुक्ला दृश्य ट्रेलरमा हेर्न सकिन्छ ।
दक्षिण भारतीय फिल्मको कथावस्तु नेपालसम्म जोडिएकाले स्वस्तिमा र मात्स्य गुरुङले पनि फिल्ममा खेल्ने मौका पाएका हुन् । राजिव सेट्टीद्वारा निर्देशित फिल्मको प्रर्दशन मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पहिरोले पोखरा दोबिल्ला वस्ती र पुल जोखिममा
पोखराको बसुन्धरा पार्कमा युवा मृत फेला